पाण्ड्या दाजुभाईले किने विराट र धोनीको भन्दा महंगो कार - Everest Dainik - News from Nepal
पाण्ड्या दाजुभाईले किने विराट र धोनीको भन्दा महंगो कार
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर हार्दिक पाण्ड्या र कुणाल पाण्ड्याले नयाँ कार खरिद गरेका छन् ।
दुवै दाजु–भाईले लेम्बोर्गिनी कार खरिद गरेका हुन् । उनीहरुले किनेको उक्त कारको मूल्य ३ देखि ५ करोड भारु पर्ने गर्छ । यो कारमा २ जनालाई मात्र बस्ने सिट छ । हार्दिक–कुणालले किनेकाे कारमा एकैपटक ९० लिटर पेट्रोल भर्न सकिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस पूर्ण फिट भए हार्दिक, तर पनि किन गुमाए न्यूजिल्याण्ड भ्रमण?
हालै पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले पनि एक जीप किनेका थिए । उनले किनेको जीपको मूल्य एक करोड भारु रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतीय क्रिकेटरमध्ये हालसम्म विराट कोहलीसँग महंगो कार रहेको थियो ।
उनले ३ करोड भारु पर्ने कार चढ्दै आएका थिए । तर, अब पाण्ड्या दाजुभाई सबैभन्दा महंगा मूल्यको कार चढ्ने भारतीय क्रिकेटर बनेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस हार्दिकले गरे छक्का–चौकाको वर्षा, ५५ बलमा बनाए १५८ रन !
ट्याग्स: कुणाल पाण्ड्या, हार्दिक पाण्ड्या